ngaphezulu kwemidlalo emi-5 yomdlali ohlukanise imidlalo yeefowuni ze-android kunye neepilisi
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-5 ephezulu yomdlali odlala umdlalo wesikrini kwiifowuni ze-Android kunye neepilisi
I-5 ephezulu yomdlali odlala umdlalo wesikrini kwiifowuni ze-Android kunye neepilisi
Ukukhangela owona mdlali mibini ulungileyo owahlula-hlulayo kwimidlalo yeefowuni ze-Android kunye neetafile ezingadingi nxibelwano ngefowuni? Ukuba kunjalo, emva koko uze kwindawo efanelekileyo!
Apha kwi-PhoneArena, sikholelwa ekubeni ii-smartphones kunye neetafile zitshintshe ubomi bethu baba ngcono. Nangona kunjalo, ngelixa sihleli sinethemba xa kufikwa kweli nyathelo litsha kwinkqubela phambili yenkcubeko yethu yehlabathi, thina & apos; asiyihoyi into yokuba izixhobo eziphathwayo zihlala zithanda ukwahlula abantu abasingqongileyo, nto leyo ingeyiyo into elungileyo.
Kule meko, abaninzi babhenela kwimidlalo yabadlali abaninzi kwi-Intanethi ukuze banciphise ukuba bodwa. Ngelixa imidlalo yabadlali abaninzi kwi-Intanethi ilungile ekuchitheni ixesha elinomgangatho kunye nabahlobo abakude kakhulu, kwaye abasisebenzisi kangako xa nobabini nikwigumbi elinye. Emva kwayo yonke loo nto, ukusebenzisa i-Wi-Fi router kunye nezixhobo ezibini ezizodwa ukunxibelelana nomntu ohleli ecaleni kwakho awungxoli ngokuchanekileyo 'ukusebenzisana kwabantu', ngaba akunjalo?
Ngale nto engqondweni, sithathe ixesha lokuskena kwiVenkile yeGoogle Play ukuzama ukufumanisa eyona midlalo mibini idlalayo kwimidlalo yesikrini ye-Android engadingi nxibelelaniso lweselfowuni. Nazi iziphumo zethu:
Ukuba uziva ngathi kukho amaxesha apho uziva unomdla wokutyumza umhlobo wakho & apos; s okanye umntakwenu & intloko, ungakhathazeki, asizukugweba! Ngethamsanqa, ukuqhubela phambili ukuvumela ukuba wenze oku ngaphandle kokufumana iziphumo ezingafunekiyo ezinje ngejele kunye nokufa. Njengokuba igama lalingakhange licebise ngokwaneleyo, Qhuba Phambili ngumdlalo we-Android apho abadlali ababini bazama ukutyumzana iintloko kunye nesithuthi.
Izinto ezibonakalayo azonwabisi ngendlela eyothusayo, kodwa zihamba kakuhle nobume obulula beDrive phambili. Ngobunzima obongeziweyo, abadlali banokusebenzisa enye yeemoto ezininzi-ukusukela kwiinqwelo-mafutha ukuya kwiitraki zenkunkuma nakwiimoto ezibalekayo zeF1- ukufezekisa injongo yabo. Iikhredithi ozifumanayo zokutyumza ukakayi zingasetyenziselwa ukuvula iimoto ezintsha kunye namanqanaba amatsha.
Ukukhanya kweHockey 2
Ngomoya wehockey arcades owela ekuthandeni kule minyaka ilishumi idlulileyo, iGlow Hockey 2 izisa amava ehockey yomoya kwisixhobo se-Android. Njengohlobo lobomi bokwenyani lwehockey yomoya, injongo yakho kwiGlow Hockey 2 kukushenxisa ipuck phantsi kweqela lomchasi kunye nokuvula iinjongo ngelixa umisa umntu ngaphesheyaitafileisikrini ekudlaleni iqhinga elifanayo kuwe.
Ulawulo lulula njengokuba beza: kufuneka usilayishe umnwe wakho kwiscreen ukuze ulawule imallet yakho, udibane nepuck kwindlela yayo, kwaye ngethemba lokufumana amanqaku. Cinga ukuba ungakwenza oku kwimeko egcweleyo ye-neon? Ke kuya kufuneka ujonge umdlalo wethu olula kodwa obandakanyekayo we-Android!
Ikati vs Inja
Owu, iikati ezindala vs iinja zibuhlungu! Ukuba & apos; ungumthandi wekati kwaye ufuna ukubonisa ukongama kwamafeline xa kuthelekiswa namaqabane e-canine, ke kwanele ngeempikiswano esele zikhona! Thatha i-Cat vs Inja kwivenkile kaGoogle Play, emva koko wenze into evuthiweyo ngayo kwaye ulahle izinto ezinje ngegesi yetyhefu kumchasi wakho. Inye into ecocekileyo ngalo mdlalo kukuba iipropathi onokuziphosa kutshaba lwakho zombini ziyahluka kwaye ziyonwabisa.
Uninzi lwethu lwadlala ngempama-jack ebuntwaneni bethu kwaye iiHands eziBomvu zibonelela ngamava afanelekileyo omdlalo ofanayo. Abachasi ababini babekwe kwiikona ezichaseneyo zesikrini, kwaye kuxhomekeke ekubeni ngubani & amp; jikela, iqhosha kwisiphelo ngasinye linokusetyenziselwa ukuhlasela okanye ukubuyela umva. Injongo kukuthintela uhlaselo olungenayo ngelixa uqinisekisa ukuba ezakho zihlala emhlabeni ngokufanelekileyo. Ngelishwa, nangona kunjalo, into ebuhlungu - ebaluleke kakhulu kumdlalo wempama ye-jack-ayinyani.
Ngelixa imidlalo edlulileyo ibininzi kwicala le-arcade yokudlala, wena kunye ne-apos kuyakufuneka ukhuphe isicwangciso-qhinga kuwe ukuze uye phambili kwi '4 kumqolo'. Kumdlalo, umdlali ngamnye uyatshintshana ngokulahla ii-disc kwibhodi enemingxunya engama-42, kunye nomxhuzulane otsala iidiski ezantsi kwesikrini. Njengoko igama libonisa, injongo kukudibanisa iidiski ezi-4 ngokulandelelana, ngokuthe nkqo, ngokuthe tye okanye ngokudibeneyo. Cinga ngale nto njengohlobo lwamandla omxhuzulane weTic Tac Toe!
Ukuvuza kutyhila ezinye zezinto ezinomdla eziza kuthotho lwe-Samsung Galaxy S21